Tag: fizarana rakitra | Martech Zone
Tag: fizarana rakitra
Ny maha-zava-dehibe ny fiaraha-miasa amin'ireo mpivarotra amin'ny hidin-trano
Talata, Oktobra 27, 2020 Talata, Oktobra 27, 2020 Tunio ZAFER
Ny fandinihana ny mpivarotra sy ny CEO nandritra ny vanin-taona mafana dia nahita fa dimy isan-jato monja no tsy nahita zava-tsoa amin'ny fiainana ao amin'ny lockdown - ary tsy nisy olona na iray aza nilaza fa tsy nahalala zavatra iray izy ireo nandritra izany fotoana izany. Ary miaraka amin'ny fangatahana mihoampampana amin'ny hetsika ara-barotra aorian'ny fanidiana lohataona, dia toy izany ihany koa. Ho an'ny xPlora, masoivohom-barotra sy nomerika miorina ao Sofia, Bulgaria, ny fahaizana mizara rakitra fisainana
Zoma, Jona 8, 2018 Asabotsy, Jona 9, 2018 Douglas Karr
Box, Dropbox, Google Drive… miaraka amina mpanjifa marobe izay mampiasa sehatr'asa samy hafa, loza ny folder'ny mpanjifako. Indray mandeha isan-kerinandro na mihoatra, mamindra ny angon-drakitry ny mpanjifako rehetra aho amin'ny fizarana tambajotra madio sy voalamina izay voatazona. Andro aman'alina anefa, loza ny manandrana mitady sy mandefa rakitra… mandraka ankehitriny. Mampiasa Droplr ny masoivoho mpiara-miasa aminay. Manalasala ny hahazo fitaovana filesharing hafa, tsy namidy aho tamin'ny voalohany. Na izany aza, rehefa mandeha ny fotoana
Talata, Jona 5, 2012 Talata, Jona 5, 2012 Marty Thompson
Efa nahatsapa ho teritery ve ianao rehefa nandefa fampahalalana marobe tamin'ny vinavina, mpanjifa na mpiara-miasa? Ny FTP dia tsy tratra mihitsy ho safidy malaza na ho an'ny mpampiasa, ary ny fikajiana mailaka dia manana fetrany sy tavoahangy manokana. Ny fananana lahatahiry zaraina amin'ny lozisialy anaty rakitra dia voafetra ny fidirana ary manao asa bebe kokoa ho an'ny ekipa IT anatiny. Ny fiakaran'ny fikirakirana rahona izao dia manolotra vahaolana mety, ary eo amin'ireo sorona mifototra amin'ny rahona isan-karazany izay mamela ny fitehirizana, ny fitantanana ary ny fizarana
Ny famolavolana na famolavolana fampielezan-kevitra amin'ny marketing dia mitaky fitantanana atiny sy sotasota fiaraha-miasa. Matoky aho fa leo anao amin'ny fanovana tsy manam-paharoa amin'ny VPN na fikirakirana firewall hanamorana ny fiaraha-miasa mihamitombo! Ny mety dia mampiasa intranet na SharePoint efa tonta ianao. Ny famindrana ny traikefa tsy misy tohiny izay omen'ny rahona Huddle workspace, dia tena hahatonga ny fiaraha-miasa sy ny fitantanana ny atiny ho traikefa nahafinaritra fa tsy ilay raharaha mandreraka sy mandreraka